Somaliland: Goorma Ayaa La Qaban Doonaa Tartanka Gobollada?
HomeWararka MaantaSomaliland: Goorma Ayaa La Qaban Doonaa Tartanka Gobollada?
Hargeysa (www.cadalool.com) – Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland ayaa xaqiijisay in sannadkan 2015 la qaban doono tartanka gobollada Somaliland, kaas oo aan wali loo muddaynin wakhti rasmi ah oo uu furmi doono.
Agaasimaha wasaaradda ciyaaraha Somaliland, Maxamed Xuseen Dhabbeeye ayaa sheegay in ay ku hawlan yihiin qabanqaabada isla markaana ay shaacin doonaan taariikhda rasmiga ah ee la qaban doono tartanka.
“Waanuku jirnaa qaban-qaabadii koobka gobollada, si dhakho ah ayaananu ku shaacin doonaa. Waxa aanu wadnaa waxyaabihii ka horreeyey ee ka baaraan-degga ahaa. Waxa aanu la eeganaynaa fasaxa iskuullada (dusiyada waxbarashada) iyo xilliga duu garoonku ku dhamaan karo, waxa aanu dhaafin doonaa ama ka soo horreysiin doonaa RAMADAAN-ta. Waxa aanu ka tixgelinaynaa doorashada madaxtooyada oo ahayd inay sannadkan dhaco, meelahaas oo dhan marka aanu ka fiirsano haddii Allah yidhaahdo si dhakhso ah ayaanu u shaacin doonaa wakhtiga la qabanayo” sidaa waxa yidhi agaasimaha wasaaradda ciyaaraha oo ka hadlayay wakhtiga la qaban doono koobka Gobollada Somaliland.
Masiibadii Dhaawacyada Arsenal Oo Mar Kale Bilaabantay
26/07/2016 Abdiwahab Ahmed
Liverpool 7-0 Spartak Moscow – All Goals and Highlights